Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Ka Socda Gobolka Bari (Sawiro) – Hornafrik Media Network
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Ka Socda Gobolka Bari (Sawiro)
Taliyaha ciidanka Puntland Jeneraal Saciid Maxamed Xirsi (Saciid Dheere) ayaa goobta dagaalka gaaray, isagoo hogaaminaya Ciidamo Gurmad ah.
Al-shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin Internetka waxay ku sheegteen iney dileen 61 kamid ah ciidamada Puntland, kuwo kalena ay dhaawaceen, iyadoo weli Puntland dhankeeda aanay war kasoo saarin dagaalladaasi.
Afhayeenka Kooxda Al Shabaab, C/Caziiz Abuu Muscab ayaa idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka Kooxda u sheegay in dagaalka ay ku dileen 61 Askari islamarkaana ay ku qabsadeen 16 gaari oo 9 kamid ah yihiin gaadiidka dagaalka ee Tikinikada loo yaqaan.
Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhedo ayaa isna dhinacooda u sheegay Wakaalada wararka ee Reuters Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Af Urur. isla markaana ay haatan wadaan dadaalo ay dib ugu xoraynayaan Deegaankaasi
Weerarkan oo bilowday afartii aroornimo ee Saaka ayaa waxay maleeshiyadu gudaha u galeen xerada tuullada Af urur oo 105 km koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso.
Wararka hornafrik ay ka heshay goobta dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in in ka badan 50 qof ay dhinteen oo labada dhinac ka tirsan kuwaasi oo wali maydkoodu yaalaan goobtii lagu dagaallamay.
Al-shabaab oo Gubay Tuulada Busleey ee Gobolka Shabellaha Hoose